एक कार्यकर्ताले पत्र लेख्दै मागे प्रचण्डको राजीनामा « Sansar News -->
एक कार्यकर्ताले पत्र लेख्दै मागे प्रचण्डको राजीनामा
१ श्रावण २०७७, बिहीबार १६:०७
तपाईले स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेसँगै हामीलाई पनि बाटो खुलेको छ । पार्टी एकता देखि तपाई यो एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो मङ्कसीर देखि त तपाई कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यसमानेमा पार्टीको यो हालत हुनुमा तपाइको जिम्मेवारी पनि त होला नि !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा पछिल्लोपटक देखिएको आन्तरिक विवादले यतिबेला पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई समेत निरास बनाएको छ ।
दुई पार्टीको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थानिय देखि संघीय सरकारसम्म बलियो पकड छ । तर यस्तो अवस्थामा सक्ति प्राप्तिका लागी वार्गेनिङ्क गर्नु वेइमानी हो भन्दै नेकपाका कार्यकर्ता पुष्पलाल पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको राजिनामाको माग गर्दै पत्र लेखेका छन् ।
यस्तो छ पाण्डेको पत्र :
आदरणीय अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालज्यू
यहाँलाई सम्वोधन गरेर पत्र लेखिरहँदा तपाई सक्ति प्राप्तिको वार्तामा हुनुहुन्छ । सम्भवत यो वार्ताको परीणाम र यो अकिन्चनको सानो गुनासो एकैपटक बाहिर आउला । त्यस्तो भए त्यो केवल एउटा संयोग मात्रै हुने ख्वामितमा जानकारी गराउन चाहान्छु । तपाई अहिले देशले मात्रै होइन दुनियाले सुन्ने नेता हुनुहुन्छ । यस मानेमा मैले तपाईलाई नसुन्ने र नहेर्ने भन्ने सवाल नहोला । अझ पछिल्लो पटक तपाईले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग्नु र सोहि वेलादेखि ओली फाल्न सरहद बाहिरका सक्ति लाग्नुको सँयोग परेदेखि तपाईमा मेरो अलि बढिनै चासो रह्यो । यस्तो हुनु स्वभाकि हो किनभने म पनि तपाइले नेतृत्व गरेको दलको सुभचिन्तक कार्यकर्ता हुँ । पार्टीको सुप्रीमोलाई एउटा भुरे कार्यकर्ताले चिठि लेखेको ख्वामितलाई कति चित्त वुझ्ला या नवुझ्ल्ला यो ख्वामीतकै दखल अन्दाजिमा छोडिदिदै आफ्नो गुनासो राख्न चाहान्छु । हुन त तपाई र अर्का अध्यक्ष ओलि विचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्दै गरेको यो वेलामा यि सव्दहरु नलेखेको भएपनि हुन्थ्यो ।
तपाईले पार्टी स्थायी कमिटिमा उठाउनु भएका तर्कहरु खुव दमदार थिए । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली कति पानी माथी छन् । अहिले म त्यता जान चाहिन । तर एकजना अध्यक्षको रुपमा तपाईले अर्का अध्यक्ष ओलीको राजिनामा मागीरहँदा भने कताकता विझायो । अहिले म त्यहि काँडो निकाल्ने प्रयासमा छु । हो अध्यक्षज्यू पार्टी एकता निष्कर्षमा पुगेको छैन । पार्टी कमिटिहरु भद्दा र निष्कृय छन् । जनवर्गिय सँगठनहरुको अवस्था त अत्यन्त्यै दयनिय छ । साच्चै भन्ने हो भने अहिले पार्टी कतै देखिदैन । अझ अहिले त पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने वेला हो । यस्तो वेलामा पार्टी कतै नदेखिदा तपाइलाइ जत्तिको अप्ठ्यारो हामि कार्यकर्तालाई पनि भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी पुग्दा हाम्रो मनपनि खुव रोएको छ । कहिलेकाहि त हिजोका दुइ पार्टी एकतामा रमाएको यो मन आफ्नै होइन की जस्तो पनि लाग्दछ । तर मन थामेर बस्नुको बिकल्प हामी सँग छैन । किनकि हामीसँग तपाइहरुको राजीनामा माग्ने अस्त्र छैन । यो अस्त्र तपाई दुइजना अध्यक्षहरुले कम्तीमा अहिलेलाई खल्तीमा राखिदिनु भएको छ ।
तर तपाईले स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेसँगै हामिलाई पनि बाटो खुलेको छ । पार्टी एकता देखि तपाई यो एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पछिल्लो मङ्कसीर देखि त तपाई कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यसमानेमा पार्टीको यो हालत हुनुमा तपाइको जिम्मेवारी पनि त होला नि ! तोकिएको समयमा पार्टी एकताका सवै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने, पार्टीको पोलिटब्युरो अझैसम्म गठन गर्न नसक्ने, जनवर्गिय सँगठनहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने । आफुलाई पार्टीले दिएको कुनै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तपाईको राजीनामा हामीले माग्न पाउने की नपाउने । म त भन्छु यि केहि काम गर्न नसके पछि तपाईले पनी राजिनामा दीनुस् ।
तपाईले स्थायी कमिटिमा सक्तिका लागी बार्गेनिङ्ग गर्नुभएको हो । श्रोतहरुका अनुसार तपाई र अर्का अध्यक्ष ओलीवीच कुरा मिलिसकेको छ । तपाईको बार्गेनिङ्गले तपाईले सक्ति पाइसक्नु भएकोमा मेरो तर्फवाट वधाइ छ ।
अव केहि समय पार्टी फेरी राम्रै गरी चल्ने छ । तर तपाईको बानी भने फेरिने छैन ।
मलाइ लागेको थियो तपाई परीवर्तन हुनुभयो । तपाईको यहि परीवर्तनको मूल्यमा हो, हामिले १७ हजार मानीसको आलो रगत आफ्नो माथमा लगाएर तपाईले गरेको पापको भागीदार बनेको । तपाईका लडकाहरुले जर्वजस्ती लगाएको चन्दा तिरेका र तिर्न नसकेर पलायन भएका लाखौ मानीसको आँसुले नुहाएर तपाईलाई चोख्याएको । यसमा हाम्रो एउटै स्वार्थ थियो एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र भएको हेर्ने । अहिले एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । स्थानिय देखि सँघिय सरकारसम्म नेकपाकै बलियो पकड छ । यस्तो अवस्थामा सक्ति प्राप्तिका लागी बार्गेनिङ्ग र्नु वेइमानी हो । वलियो कम्युनिष्ट केन्द्रको नेता बेइमानी गर्ने हुनुहुदैन, यसकारण यी सवै समस्याको समाधान तपाईको राजिनामा मात्रै हो ।